musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Mhandara Kufamba Zvino Kuenda kuNassau neBimini
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mhandara Kufamba muThe Bahamas
Nejekiseni iri kuwedzera uye zvirambidzo zvekufamba zvichisimudza pasirese, mitsara yekufambisa ngarava iri kudzoka mukuzara kwakazara kumahombekombe eCaribbean. Mhandara Voyages 'Scarlet Lady, imwe nyowani yepamusoro, yakatanga mwaka wayo "wekutanga" kuenda kuCaribbean, ichiita kutanga kwayo muBahamas nehusiku huna "Moto neSunset Soirées," kusanganisira kumira paThe Beach Club kuBimini. Vhiki rapfuura mhemberero dzekuvhurwa dzakaitirwa muguta guru neBimini, uko Mutevedzeri weGurukota uye Gurukota rezveKushanya, Investment & Aviation Honourable I. Chester Cooper naDirector General Joy Jibrilu vakatambira rwizi rwekuenda kumahombekombe eThe Islands of The Bahamas.
Mafambiro evhiki nevhiki anokanganisa hupfumi hwenzvimbo.
Iyo Lady Scarlet ichaita nzendo dzevhiki nevhiki kuenda kuBimini neNassau kwemwedzi minomwe inotevera, kutanga Gumiguru 2021 kusvika Chivabvu 2022.
Iyo yekufambisa ngarava inoda yakakwana majekiseni kune vese vashanyi nevashandi. Vapfuuri vanozoongororwawo Covid-19 pamberi pekubhodha, mutengo unovharwa necheni yekufamba.
Panguva yemhemberero yekutanga muBimini, Mutevedzeri weGurukota Cooper akataura tariro yake yekusimudzira hupfumi achifunga nezvekudyidzana uku. "Zvikepe zvevhiki nevhiki zvinokanganisa hupfumi hwenzvimbo, uye vashanyi vanofamba rwendo vanozowana mufaro wese wezuva pachitsuwa chidiki chekupisa, kubva pakufara pane yakanaka kwazvo yeupfu-nyoro, jecha jecha jena, kuenda kunhandare dzinovatora. hove huru yemutambo, kudzika kwakadzika-gungwa, kayaking, uye kudyidzana nema dolphin, ”akadaro Mutevedzeri weGurukota Cooper.
Director General Joy Jibrilu akatsigira zvakataurwa neMutevedzeri weGurukota Cooper pamhemberero yekutanga kwaNassau, "Vafambi veVirgin Vafambi vane zuva muNassau uye zuva muBimini rinobvumidza vashanyi vako vanopfuura 2,700 XNUMX kuti vanzwe kuravira The Bahamas sezvavari ongorora mamwe eBahamas'nzvimbo dzekare dzinoyevedza uye zvinokwezva uye tinoshamwaridzana nevanhu vedu vane ushamwari, vanogamuchira vaeni. ”
Vakwegura-chete ngarava inofamba inokwana vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nemakumi manomwe (vanosanganisira vashandi) uye makumi maviri neshanu ezvokudya nezvokunwa nzvimbo. Ngarava iyi zvakare ine nzvimbo dzakawanda dzezviitiko, kasino isina utsi, arcade, mbiri-nzvimbo nzvimbo yekusimbisa muviri uye nezvimwe.
Iyo Lady Scarlet ichaita nzendo dzevhiki nevhiki kuenda kuBimini neNassau kwemwedzi minomwe inotevera, kutanga Gumiguru 2021 kusvika Chivabvu 2022. Mukucherechedza Covid-19 protocols uye kuona kuchengeteka, rwendo rwekufamba kwechikepe runoda majekiseni akazara evaeni vese nevashandi. Vapfuuri vanozoongororwawo Covid-19 pamberi pekubhodha, mutengo unovharwa necheni yekufamba. Zvirongwa zvehutano pabhodhi zvinosanganisira sanitization, kusimudzira kwepanyama, kugara kwekugumira uye kuteedzera kwehutongi hwematunhu munzvimbo yega yega.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezveVirgin Voyages cruises, shanya www.mukirana.com.